अन्तर्वार्ताको कहानी- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
भाद्र २३, २०७५ जीवनाथ धमला
काठमाडौँ — अन्तर्वार्ता भनेको सत्यवार्ता हुनुपर्छ, पारस्परिक सत्यसंवाद हुनुपर्छ । अन्तर्वार्तामा व्यक्तिको अन्तरध्वनि प्रकट हुनुपर्छ । यसमा व्यक्तिको आत्मा मुस्कुराएर रसाउनुपर्छ । अन्तर्वार्ता अनुभूतिपूर्ण हुनुपर्छ । अन्तर्वार्ता व्यक्तिको व्यक्तित्वको प्रतिविम्ब हो ।
अन्तर्वार्ता दिनु वा लिनु भनेको एउटा अनिवार्य जीवनपद्धति हो । मनुष्यजीवनको विकासक्रममा यो एक आधारभूत मानव संस्कार वा संस्कृति हो । अन्तर्वार्ता, मानव हुनुको एक आधारभूत अर्थ सम्प्रेषक र स्वाभाविक जीवन–वृत्ति पनि हो । मानवजीवनको वास्तविक आरम्भ जिज्ञासा वा कौतूहलको सहज प्रकटीकरणबाट हुन्छ । मातृभाषाको भावनात्मक एवं अर्थपूर्ण प्रयोग गर्न सिक्ने क्षमता प्रारम्भ हुनुअघि नै बालकले प्राकृतिक रूपमै शारीरिक क्रियाहरूद्वारा आफ्नो शारीरिक आवश्यकताको खोजी गर्छ । क्रमश: शारीरिक अभ्यास बढाउँदै जान्छ, अनि चेतनावृद्धिसँगै नयाँनयाँ बानीहरूमा ऊ अभ्यस्त पनि हुँदै जान्छ । रुने, मुस्कुराउनेजस्ता क्षमता प्राप्त गर्नु बालकको प्रथम ठूलो विजय हो । क्रमश: आमा र निकटस्थहरूसँगको आत्मीयता, सन्निकटता र अन्तरक्रियाहरूबाट उसले शब्दहरूको प्रयोग वा उच्चारण गर्न सिक्छ अर्थात् भाषाको प्रयोग गर्न सिक्छ । बालकले आफूले सिकेका शब्दहरूमा अभ्यस्त रहँदै जब दोहोरो संवादको चरणमा प्रवेश गर्छ, अन्तर्वार्ताको आरम्भ त्यहीँबाट हुन्छ । र, सामान्य जीवनमा त्यो आजीवन लागू भइरहन्छ । यसरी मानिसको व्यावहारिक जीवन अन्तर्वार्तामय भइरहन्छ ।
अन्तर्वार्ता भनेको मनको वार्ता, अन्तर्मनको वार्ता, भित्री मनको कुरा वा अन्तरसंवाद, छलफल, आत्मसंवाद, बयान, प्रश्नोत्तर आदि अभिव्यक्तिका अनेक रूप र आयामहरूमा विस्तारित लिखित वा अलिखित रूपमा गरिने आत्मविचार प्रकटीकरणको एक विधा हो । यसको शाब्दिक अर्थ विस्तृत छ । कसैले आफ्नो मनमा लागेको कुरा अर्को कोही प्रश्नकर्ताद्वारा सोधिएको आधारमा व्यक्त गर्छ भने त्यसलाई सामान्य रूपमा अन्तर्वार्ता भनिन्छ । अन्तर्वार्तामा सवाल र जवाफ आलोपालो चलिरहन्छ । यसमा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिका बीच प्रश्नोत्तर हुन्छ । मूलत: अन्तर्वार्ता भनेको दुई पक्षबीचको अन्तरसंवाद हो । एकले अर्कोसँग कुनै खास विषयकेन्द्री भएर वा बहुविषयक प्रश्न वा जिज्ञासाहरू राख्छ, अन्तर्वार्तादायकले ती प्रश्न वा जिज्ञासाहरूको जवाफ दिन्छ । अन्तर्वार्ताकार र अन्तर्वार्तादायकबीचको पारस्पारिक संवाद, अन्तरक्रिया, सवाल जवाफ नै अन्तर्वार्ता भनेर बुझ्न सकिन्छ । अन्तर्वार्ताले मूलत: सोध्नेभन्दा सोधिने व्यक्तिको प्रत्युत्तरलाई इंगित गर्छ । अन्तर्वार्तामा एकभन्दा बढी प्रश्नकर्ताले एक जनासँग वा धेरै जनासँग पनि प्रश्नहरू राखेर खास विषयवस्तुप्रतिको जिज्ञासा
मेटाउन सक्छन् ।
अन्तर्वार्ताद्वारा प्रश्नकर्ता र उत्तरदाता दुवैले खास विषयमा सञ्चयन गरेका जानकारी वा ज्ञानको मापन गर्न सकिन्छ । अर्थात् यसबाट दुवै पक्षको तयारी वा अध्ययन, अनुशीलनको स्तरलाई अनुमान गर्न सकिन्छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा अनगिन्ती विषयहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, जिम्मेवार वा जानकार व्यक्तिहरूका अन्तर्वार्ताहरू प्रकाशित वा प्रशारित भइरहेका हुन्छन् । अपवादबाहेक अधिकांश ती अन्तर्वार्ताहरूको महत्त्व प्राय: तत्कालका लागि मात्र रहन्छ ।
राजनीतिक परिस्थिति वा घटनाक्रमहरू विषयक अन्तर्वार्ताहरूको महत्त्व त झन् अल्पकालीन रहन्छ । घटनाक्रमहरू परिवर्तन भइरहन्छन् । फेरि नेपालमा जस्तो राजनीति मात्र राजनीतिका लागि गरिने अर्थात् सत्ताप्राप्तिका राजनीति गरिने मुलुकका अधिकांश राजनीतिज्ञ र राजनीतिकर्मीहरूका विचारहरू अत्यन्त अस्थिर र आत्मकेन्द्री हुने भएकाले उनीहरूका सार्वजनिक अन्तर्वार्ताहरू झनै अल्पकालीन र निष्प्रभावी रहँदै आएका छन् । राजनीतिज्ञ वा कार्यकर्ताले तत्कालीन परिस्थितिबारे टीकाटिप्पणीचाहिँ गर्छन् । तत्कालीन स्थितिको टिप्पणी गर्नबाहेक प्राय:ले बोल्ने कुरा पनि खास हुँदैन, उनीहरू अधिकांशमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण र अध्ययनशीलताको न्यूनता छ । राजनीतिक व्यक्तिहरूका अन्तर्वार्ताहरूमा तिनको अल्पज्ञता प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । अधिकांश तिनका अन्तर्वार्तामा बौद्धिक रूपमा अध्ययनहीनता, प्रवृत्तिगत रूपमा आत्मकेन्द्रीयता, भावनात्मक रूपमा असहिष्णुता, शाब्दिक रूपमा रूढता, वैचारिक रूपमा नीरसता एवं अहंकारिता आदि व्यक्त भएको पाइन्छ । अर्कातिर अधिकांश क्रियाशील पत्रकारहरूमा अध्ययन अनुशीलन र अनुगमनात्मक तयारीको अभाव देखिन्छ । थोरै मात्र पत्रकारहरूले आफ्नो व्यावसायिक विज्ञतालाई कायम राखेका देखिन्छन् । तर, व्यापारकेन्द्री सञ्चारमाध्यमहरूका भीडमा तिनलाई खोज्नुपर्ने स्थिति छ ।
जुन व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रमा विशेष हैसियत राख्छ, उसको अन्तर्वार्ताले पनि त्यसैअनुसार महत्त्व राख्छ । इतिहासमा कतिपय राष्ट्रिय नेतृत्वस्तरमा पुगेका व्यक्तिका अन्तर्वार्ता विवादित भएका उदाहरण पनि पाउन सकिन्छ । अत्यधिक सञ्चारमाध्यमहरूका कारण कतिपय महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका अन्तर्वार्ताहरूमा पुनरावृत्ति पनि भइरहेको हुन्छ, यसले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रतिको जनआकर्षण र उत्सुकतामा ह्रास भइरहेको पनि पाइन्छ । एउटै कुरा हरेक समय र हरेक सञ्चार संस्थामा बोल्दा त्यसको गाम्भीर्यतामा कमी हुन जानेतर्फ जिम्मेवार मानिसले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
इतिहासमा कतिपय व्यक्तिका अन्तर्वार्ताहरू दीर्घकालीन रूपमै विचारउद्वेलित गर्ने खालका पनि पाइन्छन् । अदालतमा अभियुक्तसँग न्यायाधीशले बयान लिनु पनि अन्तर्वार्ता नै हो । घटनाक्रम, विषयवस्तु वा परिस्थितिअनुसार कतिपय अदालतका बयानहरू ऐतिहासिक महत्त्वका रहेका छन् । बीपी कोइरालाले २०३३ सालमा अदालतमा दिनुभएको बयानबाट तत्कालीन एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्थाको अप्रजातान्त्रिक चरित्रको यथार्थलाई बुझ्न सकिन्छ । बीपीमाथि जुनजुन अभियोगहरू लगाइएका थिए, तिनका विरुद्ध उहाँले दिनुभएको बयान नेपालको राष्ट्रिय इतिहासमा भएका प्रजातान्त्रिक संघर्षको एउटा कालजयी दस्तावेजका रूपमा रहेको छ । त्यससँग तूलनीय अर्को बयान इतिहासमा कसैले दिएको छैन भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । त्यो अन्तर्वार्ता पञ्चायती शासकहरू सबैलाई हल्लाउने बयानका रूपमा थियो ।
अन्तर्वार्ता लिनका लागि पत्रकारिता एउटा कार्यक्षेत्र हुन सक्छ तर अन्तर्वार्ताकार जुनसुकै कार्यक्षेत्र वा पेसासँग आबद्ध पनि हुन सक्छ । बौद्धिक, प्राज्ञिक, व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, शैक्षिक आदि जुनसुकै क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिका अन्तर्वार्ता ती क्षेत्रकै व्यक्तिहरूद्वारा लिइँदा सम्बन्धित विषयको जानकारी अझ सघन रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । एउटा पत्रकार पनि सबै क्षेत्रको विज्ञ हुँदैन । नेपाली सञ्चारगृहका अधिकांश पत्रकारहरू भेटवार्ता मात्र गरिरहेका देखिन्छन् । एक जना सक्रिय पत्रकारले न्यूनाधिक विभिन्न विधा वा क्षेत्रको ज्ञान राख्न सक्छ तर उत्कृष्ट पत्रकारिताका लागि उसले धेरै विधाको विज्ञता भने राख्न सक्दैन । अधिकांश पत्रकारले लिने अन्तर्वार्ता प्राविधिक, सीमित, औपचारिक, निश्चित उद्देश्यमुखी एवं सापेक्षिक मात्र हुन्छ जसबाट उच्च बौद्धिक, प्राज्ञिक, प्रज्ञावान एवं प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको ज्ञान सागरमा ऊ पस्नै सक्दैन । तसर्थ उच्च क्षमतावान व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिने पत्रकार पनि अन्तर्वार्तादाताको विशिष्ट क्षमताबाट पूर्ण परिचित हुनुपर्छ । या त त्यस्तो व्यक्तिसँग त्यसै क्षेत्रमा राम्रो अध्ययन गरेको व्यक्तिले अन्तर्वार्ता लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
अन्तर्वार्ताका विभिन्न शैली, औचित्य एवं अवस्था हुन्छन् । बृहद् नेपाली शब्दकोशअनुसार : ‘कुनै पदमा योग्य व्यक्ति छान्नका निम्ति सम्बन्धित अधिकारी तथा विशेषज्ञहरूद्वारा उम्मेदवारलाई प्रश्न सोधेर तिनबाट उत्तर प्राप्त गरिने कार्य वा त्यसको कुराकानी ।’ अर्को अर्थ दिइएको छ : ‘विशिष्ट व्यक्ति र पत्रकारका बीचमा हुने सवाल–जवाफ ।’ यस्तै अझ अर्को अर्थ पनि शब्दकोशमा दिइएको छ : ‘कुनै व्यक्ति–व्यक्तिका बीच आपसमा भएको गुप्त कुराकानी ।’ शब्दकोशको अर्थअनुसार कुनै परीक्षाको क्रममा सोधिने प्रश्न र परीक्षार्थीद्वारा दिइने जवाफ नै अन्तर्वार्ता भन्ने बुझिन्छ । यस्तै कुनै व्यक्तिविशेष र पत्रकारका बीच हुने सवाल–जवाफ र सामान्य रूपमा व्यक्ति–व्यक्तिका बीचमा हुने कुराकानी आदिलाई नै अन्तर्वार्ता भनिन्छ भन्ने अर्थ शब्दकोशमा दिइएको पाइन्छ । ‘अन्तर्वार्ता’ शब्दको सामान्यतम अर्थलाई उल्लिखित हिसाबले शब्दकोशमा लेखिएको भए तापनि यस शब्दद्वारा बुझ्न सकिने सूक्ष्मतम र गम्भीर अर्थबोधक आयतनलाई शब्दकोशीय अर्थले बोक्न सकेको पाइँदैन । यसर्थ ‘अन्तर्वार्ता’ को शब्दकोशीय अर्थ अपूर्ण, सीमित र अआयामिक छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
रोजगारीका क्रममा कुनै निकायका प्रतिनिधिद्वारा जागिर वा रोजगारीका आकांक्षीसँग लिइने अन्तर्वार्ताले खास विषयमा उस्को ज्ञानको औकातलाई न्यूनतम मात्रामा बुझ्न मात्र मद्दत गर्छ । यस्तो अन्तर्वार्ताले व्यक्तिको बौद्धिक क्षमतालाई पूर्ण रूपमा प्रकाशित गर्न सक्दैन । यस्तो अन्तर्वार्ता औपचारिक मात्र हो । व्यक्तिको बौद्धिक क्षमता वा प्रतिभाको आँकलन केहीबेरको प्रश्नोत्तरबाट हुन सक्दैन ।
अन्तर्वार्ता लिने र दिने विषय मनुष्यले भाषा प्रयोगका माध्यमबाट मनका भावना वा विचारहरूलाई अभिव्यक्त गर्न थालेदेखि नै भएको कुरामा दुईमत नहोला । शब्दको आविष्कार गर्नुअघि मनुष्यले सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्न सिकेको कुरा मानवशास्त्रीहरू बताउँछन् । सांकेतिक भाषाको युगलाई ध्वनियुक्त भाषाको प्रयोगले विस्थापित गर्‍यो । भाषा ध्वनियुक्त सम्प्रेषणीय संकेत भएकाले भावना वा विचारलाई अरूसमक्ष पुर्‍याउने कार्यमा यसले ठूलो परिवर्तन ल्यायो । भाषाले मानिसलाई अन्य प्राणीबाट पूर्ण रूपमा पृथक् अस्तित्वका साथ रहन सर्वाधिक भूमिका खेल्यो । भाषा शाब्दिक संकेत थियो जसले मानिसलाई आ–आफ्नो समूह, समुदायको निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍यायो । भाषारूपी संकेतको प्रयोग हुन थाल्नु प्रागऐतिहासिक मानवजगत्ले आरम्भ गरेको सर्वश्रेष्ठ आविष्कार थियो र यो मानव सभ्यताको प्रथम आविष्कार थियो । समूह–समूहका अलगअलग भाषाहरूको उत्पत्ति/आविष्कार भएसँगै मानवमानवका अनेक समाजहरूमा विचार सम्प्रेषणको सहज अभ्यासले गति लियो । पारस्परिक सञ्चार सम्पर्क एवं वार्तालापको सहज माध्यममा रूपमा भाषाको आरम्भ भएसँगै अन्तर्वार्ताको पनि आरम्भ भएको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
लिपिको आविष्कार मानव सभ्यताको अर्को महान् खु्ड्किलो थियो । भाषाको विकास क्रममा मानव जातिले लेख्ने क्षमताको पनि विकास गर्दै आयो । भाषामार्फत सहज ढंगमा विचार र भावनालाई अभिव्यक्त गर्ने क्रममा अन्तर्वार्ता शैलीको प्रारम्भ पनि भयो । स्वत:स्फूर्त रूपमा अन्तर्वार्ता मानव समाजको अभिव्यक्ति, पारस्पारिक भावनाको सम्प्रेषण शैली, जिज्ञासाहरूको आदानप्रदान र विचार विनिमयको कथ्य तकनिकीका रूपमा स्थापित हुन पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जसै भाषाहरू समृद्ध हुँदै गए, साहित्यको विकास हुँदै गयो । भाषाद्वारा साहित्यको र साहित्यद्वारा भाषाको समृद्धिमा बल पुग्दै गयो । पूर्वी वा पश्चिमी गोलाद्र्धमा अनेकाँै भाषाको विकाससँगै साहित्यको रचना पनि हुँदै गयो । साहित्यमा विचार, भावना वा अनुभूतिहरूलाई अभिव्यक्ति दिने क्रममा अन्तर्वार्ता शैलीलाई विशेष प्रयोग गर्न थालियो ।
लिखित वाङ्मय वा साहित्यमा ‘अन्तर्वार्ता’ को आरम्भ हजारौँ वर्ष पहिल्यैदेखि हुँदै आएको कुरा ज्ञात हुन्छ । संवादको माध्यमबाट मन्थन गरी निकालिएका प्रागऐतिहासिक कालदेखिका ज्ञानामृतहरू निकै छन् । प्रागऐतिहासिक कालमा ऋषिमुनिहरूका बीच भएका शास्त्रार्थहरू कैयाँै पौराणिक ग्रन्थका रूपमा लिपिबद्ध छन् । पौराणिक साहित्यका रूपमा विश्वद्वारा नै स्विकारिएको एक सर्वश्रेष्ठ साहित्य गीता हो । यो विश्व–वाङ्मयकै एक शीर्ष निधि पनि हो । यो अन्तर्वार्ता शैलीमा लेखिएको छ । त्यसका अन्तर्वार्ताकार महानतम धनुर्धारी पाण्डुपुत्र अर्जुन हुन् र उत्तरदाता भगवान् श्री कृष्ण हुन् । श्रीकृष्ण र अर्जुनका बीच भएको प्रश्नोत्तर आजसम्मकै लिखित साहित्यको सर्वाधिक लोकप्रिय अन्तर्वार्ता रहेको विश्वास गर्न सकिन्छ । यति समृद्ध महाज्ञानको स्रोत संसारमा अर्को छैन । गीता मूलत: हिन्दू अध्यात्म दर्शनमा आधारित ज्ञानको अमृतधारा हो । मानवजीवनको अर्थ, अस्तित्व एवं लौकिक र अलौकिक कर्म अनि व्यवहारहरूबारे धनुर्धारी अर्जुनद्वारा सोधिएका प्रश्नहरू र श्रीकृष्णद्वारा प्रदत्त उत्तरहरूको संकलन नै गीता महाज्ञान हो । यस्मा मानवजीवनको पूर्णता र सिद्धिका लागि सांख्ययोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, राजयोग आदिका सम्बन्धमा विशिष्ट संवाद संगृहीत छ ।
महामानव गौतमबुद्धले शिष्यहरूद्वारा सोधिएका जिज्ञासाका कैयाँै जवाफहरू बौद्धदर्शनका रूपमा लिपिबद्ध छन् । आदि महाकाव्य रामायणका अनेक प्रसंगहरू पारस्परिक संवादहरूले भरिएका छन् । आधुनिक युगमा लेखिएका काव्य, महाकाव्यहरूमा पनि अन्तरसंवाद शैलीको प्रयोग यथेष्ट छ ।
अन्तर्वार्ताको गरिमा ज्ञान वा बौद्धिकतासँग प्रत्यक्षत: जोडिएको हुन्छ । सम्बन्धित वा सान्दर्भिक विषयवस्तुप्रतिको ज्ञान, बुझाइ, पृष्ठभूमि, कारण, प्रभाव, परिणाम वा उपादेयता, सान्दर्भिक पक्षहरू पारिस्थितिक गाम्भीर्यता, सांकेतिकता, दूरदर्शिता, अध्ययनशीलता, सम्प्रेषणीयता आदि अनेक आयामहरूसँग अन्तर्वार्ताले सम्बन्ध राख्छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रस्तुत गरिने अन्तर्वार्तामा दुवै पक्षका उल्लिखित गुण वा क्षमताहरूको स्तरमापन गर्न सकिन्छ । सामान्य सूचनामूलक प्रश्नोत्तर यथार्थमा अन्तर्वार्ता होइन, त्यो सूचनावार्ता वा क्षणिक भेटवार्ता मात्र हो । नेपाली सञ्चारमाध्यमहरू मूलत: सूचनावार्ता वा भेटवार्ता गरेरै समय र कागज भर्छन् । अपवादबाहेक सघन बौद्धिकता, गाम्भीर्य र चैतन्यदायी चिरस्मरणीयताका दृष्टिले तिनको स्तरीयता अझै फेदीमै छ । कुनै उच्च प्रतिभाशाली व्यक्तिको प्रतिभा वा बौद्धिक आयतनलाई सञ्चारमाध्यमको प्राविधिक सीमाभित्र हत्पती अटाउन सकिँदैन । सञ्चारमाध्यम प्राय: तात्कालिक वा सापेक्षिक हुन्छ । कतिपय व्यक्तिको बौद्धिक उच्चता, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता र प्रभावलाई साधारण हिसाबले सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाहित गर्न सकिँदैन ।
पुस्तकहरूमा प्रकाशित कतिपय राष्ट्रिय व्यक्तित्वका अन्तर्वार्ताहरूले समकालीन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई बुझ्न इतिहासकै काम गरेका पनि हुन्छन् । यस्तै राजनीति, कला, साहित्य, संस्कृति वा ज्ञान, विज्ञान एवं अन्य विविध क्षेत्रका कतिपय विशिष्ट प्रतिभाहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएर तिनीहरूको ज्ञान सञ्चयन गरिएको पनि छ ।
अन्तर्वार्ता भनेको सत्यवार्ता हुनुपर्छ, पारस्परिक सत्यसंवाद हुनुपर्छ । अन्तर्वार्तामा व्यक्तिको अन्तरध्वनि प्रकट हुनुपर्छ । यस्मा व्यक्तिको आत्मा मुस्कुराएर रसाउनुपर्छ । अन्तर्वार्ता अनुभूतिपूर्ण हुनुपर्छ । अन्तर्वार्ता व्यक्तिको व्यक्तित्वको प्रतिविम्ब हो ।
अन्तर्वार्ता त मैले जीवनको प्रारम्भदेखि नै दिँदै आएको हुँ । यस्तै अरूसँग औपचारिक वा अनौपचारिक हिसाबले अन्तर्वार्ता लिँदै पनि आएको हुँ । तर, वास्तविक अन्तर्वार्ता के रहेछ भन्ने बुझ्न थालेको चाहिँ धेरै भएको छैन । मैले थोरबहुत बुझेअनुसार वास्तविक अन्तर्वार्ता आत्मवार्ता हो, आफैंले आफैंसँग प्रश्न गरेर आफैंलाई जवाफ दिन सक्नु नै सबैभन्दा इमानदार अन्तर्वार्ता हो, जुन अन्तर्वार्तामा अरू कसैको प्रश्न चाहिँदैन । सबैभन्दा कठिन अन्तर्वार्ता सायद आफैंले आफ्नै अन्तर्वार्ता लिनु हो, जसको अभ्यास भने आजसम्म मैले गरेको छैन, तपाईंले नि ?
नेपाललाई अनुपम प्रकृतिले साथ दिएको भनेर हामी घमण्डचाहिँ गरिराख्छौं तर त्यसलाई माया र स्याहार गर्नचाहिँ चुक्छौं ।
काठमाडौँ — ४३ सय मिटर उचाइमा उभिएको गोसाइँकुण्ड सबैभन्दा प्रमुख विशेषता के हो भने प्रकृतिको यो विन्दुमा कुण्डैकुण्ड छन् । भैरव, सूर्य, दूध, सरस्वती कुण्डलगायत सुन्दर १७ कुण्डहरू आसपासमै टाँसिएर बसेका छन् ।
हरेक वर्ष गोसाइँकुण्डमा जनैपूर्णिमाका अवसरमा भव्य मेला लाग्छ । दस हजारभन्दा बढी तीर्थालु कुण्डमा स्नान गर्न यहाँ पुग्छन् । रसुवा सदरमुकाम धुन्चेबाट तीव्र गतिमा हिँड्नेहरू एकै दिनमा वा सुस्त गतिकाहरू दुई दिनमा गोसाइँकुण्ड पुग्छन् । त्यसो त सुन्दरीजलको अर्को झन् कठिन बाटो पनि छँदैछ, कुण्ड पुग्न ।
हरेक वर्ष जनैपूर्णिमामा तीर्थालुको रेखदेख बिचार्दै हिमालयन उद्धार संघले अस्थायी स्वास्थ्य शिविर राख्दै आएको छ । झन्डै १८ वर्षयता यो क्रम नित्य छ । माउन्टेन मेडिसिन सोसाइटी अफ नेपालका तर्फबाट पनि स्वयंसेवक चिकित्सक शिविर सञ्चालनमा खटिएकै हुन्छन् । यस पटक त्यो अवसर मसहित पाँच चिकित्सकले पाएका थियौं ।
जनैपूर्णिमाको अघिल्लो रात हामी सिफ्ट मिलाएर रात्रिकालीन डयुटीमा व्यस्त थियौं । रमाइलो मेला नै हुन्छ त्यो रात, खाने, गाउने, नाच्ने, बजाउने चलिरहन्छ अबेरसम्म तामाङ समुदायको । छेवैको शिव मन्दिरको घण्टीको आवाजसँगै मिसिएर तामाङ गीत र नाचको ध्वनि हाम्रो शिविरको छाप्रोसम्मै आइरहेको थियो । अन्य पर्यटकभन्दा तीर्थालुहरू केही फरक हुन्छन् । न जाडो छल्न पर्याप्त लुगा, न खुट्टामा जुत्ता, व्रत बसेको खाली पेट र सीमित जनचेतना । त्यसैले तीर्थालुहरूमा झन् बढी समस्या देखिन्छन् । त्यसो आन्तरिक पर्यटकमा पनि लेक लाग्ने समस्या र जनचेतना अभाव उत्तिकै विकराल समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
जनैपूर्णिमाको दिन बिहान ३ बजेदेखि नै उत्सव सुरु भइसकेको थियो । स्नान गर्ने तीर्थालुको भीडले कुण्ड छेउछाउ पूरै भरिएको थियो । अघिल्लो रातभरिको नाइट डयुटीको हयाङ भए तापनि पवित्र दिन भएकाले कुण्डमै नुहाउने अठोटसहित अरू साथीसँगै म पनि लागें कुण्डतिर । तर, गोसाइँकुण्डको अवस्था देखेर मन साह्रै खिन्न भयो ।
नेपाललाई अनुपम प्रकृतिले साथ दिएको भनेर हामी घमण्डचाहिँ गरिराख्छौँ तर त्यसलाई माया र स्याहार गर्नचाहिँ चुक्छौं । गोसाइँकुण्ड त्यस्तै प्रकृतिको अनुपम उपहार हो, सुन्दर तालहरू र यात्रा अवधिभर मनै लोभ्याउने लाङटाङ हिमाल, गणेश हिमाल र मनास्लु हिमालको ‘प्यानोरोमिक’ दृश्य देख्न पाइन्छ । सांस्कृतिक रूपमा पनि हिन्दु र बौद्ध धर्मको सहिष्णुताको संगम हो । तर, गोसाइँकुण्डमा जे देखियो, त्यसले कुन प्रकृतिप्रेमीको मन नरोला र ?
—डा. सुमन आचार्य